Liling ukwenziwa xingtailong kunye nonikezelo High Performance Fire Uvavanyo Crucibles.
kulingwa umlilo kusetyenziselwa uvavanyo isiqulatho metal esixabisekileyo kwizimbiwa. yodongwe kulingwa umlilo ngokuyinyibilikisa yethu yenziwa ekumgangatho ophezulu izinto ekrwada ezifana alumina, mullite kunye kaolin, njl
Lusetyenziswa nokombiwa kwegolide, isityalo metallurgical kunye nezinye iindawo uhlalutyo metal lwesampulu. Imela lobushushu eliphezulu 1350C.
Ukuhanjiswa& Service: ezifika ukunikezelwa ngexesha ngalinye. Ukunika inkonzo enokuthenjwa nenoxanduva umxumi ngalinye imveliso nganye. zethu Baqonde ukuba anelise zonke umxumi ngenkonzo engcono.